Vaovao - Tombontsoa azo avy amin'ny lasy
Ny camping dia manana tombony be dia be ho an'ny olon-dehibe sy tanora rehetra izay azon'ny fianakavianao ankafizinao rehefa mandany fotoana any ivelany:
1. Fampihenana ny adin-tsaina:Avelao ao an-trano ny fandaharam-potoana be loatra.Rehefa mitoby ianao, dia tsy misy toerana hipetrahana amin'ny fotoana iray, ary tsy misy na inona na inona manelingelina anao na mifaninana hahazoana ny sainao.Ny vokatra voajanahary amin'ity karazana toe-javatra ity dia ny fampihenana ny adin-tsaina sy ny fialan-tsasatra izay tsy hitanao any an-kafa.
2. Rivotra madio:Mety tsy ho tsapanao ny tsy fahampian'ny rivotra madio eo amin'ny fiainanao andavanandro.Rehefa mandeha lasy ianao, dia mahazo ny hanitra mahagaga eny ivelany, ary koa ny fofon'ny sakafo hariva amin'ny afo misokatra.
3. Fananganana fifandraisana:Ny iray amin'ireo lafiny tsara indrindra sy manan-danja indrindra amin'ny lasy dia ny fomba hanampiana anao hanorina sy hanamafisana ny fifandraisana.Rehefa mandeha lasy miaraka amin'ny namana na fianakaviana ianao, dia afaka miresaka sy mitsidika tsy misy fanelingelenana, na dia amin'ny alina aza.
4. Fahasalamana ara-batana:Fotoana ara-batana ny fotoana lanin'ny lasy.Manangana lay ianao, manangona kitay, mandeha mitsangatsangana.Ao an-trano, matetika isika no miaina fiainana mipetrapetraka izay tsy mampiroborobo ny fahasalamana ara-batana.Rehefa mitoby ianao dia tsy afaka ny tsy hanao hetsika ara-batana sy hampiakatra ny fitepon'ny fonao.
5. Tsy fahampian'ny famantaranandro fanairana:Oviana ianao no farany natory tara tsy nisy famantaranandro fanairana hamoha anao?Rehefa mitoby ianao dia ny masoandro sy ny siokan'ny vorona ihany no fanairana.Ny fifohazana miaraka amin'ny natiora fa tsy amin'ny famantaranandro fanairana dia traikefa tokony hananan'ny rehetra tsy tapaka.
6. Esory ny plug:Fotoana tsara ho an'ny rehetra ny lasy mba hanala sy hialana amin'ny efijery.Any an-kalamanjana, tsy mahita solosaina, tablette na fahitalavitra ianao ary be dia be ny zavatra hafa azo atao izay tsy mitaky elektronika.
7. Sakafo lehibe:Tsara kokoa ny sakafo rehefa voaomana any ivelany.Misy zavatra momba ny fandrahoan-tsakafo amin'ny afon-dasy, fatana fatana iray na ao amin'ny lakozia Deluxe Cabin izay tsy azo averina rehefa misakafo ao an-trano ianao.Ankoatra izany, tsy misy zavatra mihoatra noho ny vita amin'ny afo misokatra.Manonofy lehibe ary manomana sakafo tsara alohan'ny handehananao amin'ny dianao manaraka.
8. Fifandraisana amin'ny natiora:Rehefa mitoby ianao dia mahazo fahafahana mifandray amin'ny zavaboary, mifanena amin'ny bibidia ary mahita ny kintana miala amin'ny jiro mamirapiratra ao amin'ny tanàna lehibe.Tsy misy zavatra mitovy amin'izany.Ataovy azo antoka fa manana fahafahana hifandray amin'ny zavaboary ianao sy ny fianakavianao rehefa mandinika ireo tombontsoa maro azo avy amin'ny lasy.
9. Fampandrosoana fahaiza-manao vaovao:Tsy afaka ny tsy hampivelatra fahaiza-manao vaovao ianao rehefa mitoby.Handray anjara avokoa ny rehetra amin'ny dia ary fahafahana lehibe hianarana zava-baovao izany.Azonao atao ny mianatra manamboatra lay, mamatotra fatotra, manomboka afo, mahandro sakafo vaovao sy ny maro hafa.Zava-dehibe ny ananana ireo fahaiza-manao ireo, kanefa matetika isika dia tsy mahazo fahafahana hampivelatra azy ireo mandritra ny fandaharam-potoanantsika matetika.
10. Fanabeazana:Ho an'ny ankizy, ny fotoana lany amin'ny lasy dia fotoana lany amin'ny fianarana, izay iray amin'ireo antony maha-sarobidy ny fandaharan'asa skoto.Manamora ny traikefan'ny lasy izy ireo izay naorina manodidina ny ankizy mianatra zava-baovao, ao anatin'izany ny fanjonoana, ny fandrahoan-tsakafo, ny fitsangantsanganana, ny fatorana fatotra, ny famonoana afo, ny fiarovana, ny fanampiana voalohany ary ny maro hafa.
11. Fitomboan'ny fahatokisana:Zava-dehibe ho an'ny ankizy ny hahaleo tena tsikelikely sy hatoky tena amin'ny fahaizany.Anisan’ny tombony azo amin’ny fanaovana lasy ho an’ny tanora ny ahafahan’izy ireo mianatra ny fahaleovantena ao anatin’ny tontolo azo antoka sy voafehy.Lasa matoky tena kokoa ny ankizy rehefa mianatra zava-baovao sy manana traikefa voalohany.
12. Fifandraisana amin'ny fianakaviana:Mahasoa ny ankizy sy ny fianakaviany ny fitobiana satria afaka manampy amin'ny fanamafisana orina ny fifamatorana eo amin'ny mpianakavy — rahalahy sy anabavy, ray aman-dreny sy zanaka ary mitohy ny lisitra.Hody any an-trano ianareo rehetra hahatsapa ho matanjaka kokoa amin'ny maha-vondrona azy.